ချစ်စံအိမ်: ကညင်ကုန်ကျေးရွာ မီးစက်အလှူအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေစာရင်း
ကညင်ကုန်ကျေးရွာ မီးစက်အလှူအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေစာရင်း
သဒ္ဓါကြည်လင် စေတနာရှင် အလှူရှင်အပေါင်းတို့ရှင်.. ဦးဇင်းအရှင်ဝိမလ၀ံသမှ ဦးဆောင်၍ ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၀က်ခြံဂယက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာလေး အတွက် မီးပေးနိုင်ရန် မီးစက်အလှူကို ( ၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂ ) ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ပါတယ်…။ ယခု မီးစက်အလှူအတွက် ကုန်ကျမယ့် အထွေထွေစာရင်းကို တွက်ချက်ကြည့်ရာတွင် ခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သိန်း (၃၀) လောက်ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းတွက် ချက်ထားပါတယ် အသုံးပြုမယ့်မီးစက် အမျိုးအစားကတော့ တရုတ်နီစက် အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်….။ ( မြင်းကောင်ရေ4အားနဲ့ 15000 W (15 KW ) မီးအားထုတ်ပေးနိုင်မဲ့ ဒိုင်နမို အပါအ၀င် မီးစက်တစုံစာအတွက် ) ယနေ့ ရန်ကုန် ပေါက်ဈေး ကျပ် (၁၄ )သိန်း ဖြစ်ပါတယ် ရှင်။
ဒါကြောင့် ဈေးလေးလည်းသင့်တင့်သလို အသုံးလည်းတည့်တာမို့ ဒီစက်လေးကို ရွေးချယ်ထားပါတယ် ရှင်…။ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးတလျှောက် ၊ ရွှေပုန်းညှက်အိမ်ရာ (ရေ ကြောင်းသိပ္ပံရှေ့)၊ ဆင်မလိုက်၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ လမ်းမတော်စတဲ့ မီးစက်အရောင်း ဆိုင်တွေမှာတော့ မီးစက်အကောင်းစားတွေလောက်ပဲ ရှိပါတယ်…။ လှူချင်ပေမယ့် ဈေးကြီးတာမို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး ရှင်…။ ဈေးအချိုဆုံး မီးစက် 20 KW ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ တရုတ်ဖက်ဆက်စက်တလုံးရဲ့တန်ဖိုးက (၄၁) သိန်း လောက်ရှိနေတာမို့ လက်ခံရရှိထားတဲ့ အလှူငွေပေါ်မူတည်လို့ ကျွန်မတို့ မတတ်နိုင်သေးတာမို့ တရုတ်နီ အမျိုးအစား စက်ကိုသာ့  ရွေးချယ်ထားကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ရှင်...။ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ (၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂) မှစ၍ ယနေ့အထိ ကောက်ခံရရှိထားသော အလှူငွေနှုင့် အလှူရှင်စာရင်း များကိုအောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပေးပါမယ်ရှင် ။ မေလပိုင်း ကုန်တဲ့အထိ အလှူငွေကို ကောက်ခံမှာဖြစ် သလို မီးစက်အလှူအတွက် ပြီးပြည့်စုံလို့ ပိုလာမဲ့ အလှူငွေကိုလည်း မီးစက်အလှူရှင်များအတွက် ထပ်မံပြီး အလှူအတန်း တခုခုပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ် ရှင်။
၁။ ၂၀၈၃၀၀၀ ………………………… ( ကျပ် )
၃။ ၂၀၀ ……………………….... ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ )
၆။ ၂၀၀ .......................................(အင်္ဂလန်ပေါင်)
၇။ ၁၀၀၀ ....................................(အိန္ဒိယ -ရူဘီး)
၁၉ မမီမီထွန်း (ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုးနဲမြို့) ၁၀၀၀၀၀ိ/ ( ကျပ် )
(သမီး)မမေမြတ်နိုးအောင် မြန်မာပြည် (ရန်ကုန်) ၃၀၀၀၀ိ/ ( ကျပ် )
၃၁ ဦးမျိုးဝင်းတင် + ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝေ ( မိသားစု ) မလေးရှာ (ကွာလာလမ်ပူ) ၁၀ (မလေးရှားရင်းဂစ်)
၃၂ မောင်စိုင်းလေး မလေးရှာ (ကွာလာလမ်ပူ) ၁၀၀ (မလေးရှားရင်းဂစ်)
၃၃ ဦးညီညီအောင် နှင့် ဇနီး မလေးရှား ( ကွာလာလမ်ပူ ) ၂၀ (မလေးရှားရင်းဂစ်)
၃၄ ကိုလှိုင် နှင့် ဇနီး မလေးရှား ( ကွာလာလမ်ပူ ) ၅၀ (မလေးရှားရင်းဂစ်)
၃၆ ကိုသစ်ဆန်း မလေးရှား ( ကွာလာလမ်ပူ ) ၁၀ (မလေးရှားရင်းဂစ်)
အောက်ပါ ဘလော့ စာမျက်နှာများပေါ်တွင်လည်း ဖော်ပြထားပါတယ် ရှင်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း .094- 21052618
Posted by ချစ်စံအိမ် at 2:05 PM
စံပယ်ချို April 22, 2012 at 3:33 PM
နွေလ April 22, 2012 at 8:53 PM
သာဓုခင်ညာ သာဓု သာဓု
ဖြိုးဇာနည် April 24, 2012 at 12:46 AM
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သာဓု အနုမောဒန ခေါ်ဆိုပါတယ်
မိုးသူ(တောင်ကြီး) April 24, 2012 at 6:13 PM